संगै काम गरेका पत्रकारको नि*धन भएपछि रवी लामिछाने पुगे श्रदान्जली दिन भिडियो ! – Life Nepali
संगै काम गरेका पत्रकारको नि*धन भएपछि रवी लामिछाने पुगे श्रदान्जली दिन भिडियो !
काठमाडौँ। वरिष्ठ पत्रकार राजेन्द्रदेव आचार्यको कलेजोमा देखिएको ख’राबीका का’रण ६१ वर्षको उमेरमा नि’धन भएको छ । दुई दशकसम्म नेपाल टेलिभिजनको समाचार प्रमुख भई नायब महाप्रबन्धकबाट अवकाशप्राप्त उहाँ हाल न्यूज–२४ को समाचार प्रमुख हुनुहु’न्थ्यो । कलेजोको रो’गका का’रणले असामयिक नि’धन हुनुभएका स्व आ’चार्यको आइतबार नै प’शुपति’स्थित आ’र्यघा’टमा अ’न्तेष्टि गरिएको छ ।पारिवारिक स’दस्य तथा शु’भचिन्तकहरुको सहभागितामा उ’हाँको हिन्दू परम्पराअनुसार अ’न्त्येष्टि गरिएको हो । उहा कलेजोसम्बन्धी स’मस्याबाट पी’डित रहँदै आएका थिए। केहि दिन अगाडी वीर अ’स्पतालमा उनको उ’पचार भएको थियो।
उपचारपछि घर फर्किएका आचार्यलाई पुनः सो स’मस्याले च्या’पेपछि शनिबार नर्भिक अ’स्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। नेपाल टेलिभिजनमा २०४४ सालबाट सेवा सुरू गरेका आचार्य पछिल्लो दुई वर्षदेखि न्यूज-२४ मा समाचार प्रमुखका रूपमा कार्यरत थिए। त्यस्तै उनले लामो समयसम्म पत्रकारिता केन्द्रीय विभाग रत्नराज्य लक्ष्मी कलेजलगायतमा पत्रकारिता विषयको प्रशिक्षणमा समेत सक्रिय थिए। श्र’द्धाञ्ज’ली कार्यक्रममा च्यानलका अध्यक्ष अनिल जोशीले उहाँको योगदानको चर्चा समेत गर्नुभयो । न्युज २४ टेलिभिजनले एक कुशल सारथी गुमाएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस्तै, सिधाकुरा जनतासँग कार्यक्रमका प्रस्ताेता एवं न्यूज २४ का कार्यकारी निर्माता रवि लामिछानेले विगतमा सँगै काम गरेदेखि न्यूज २४ सम्म उहाँले गर्नुभएको योगदानको चर्चा गर्नुभयो । उहाँले पत्रकारिताको क्षेत्रमा आचार्यले निर्वाह गर्नुभएको भूमिका प्रेरणायोग्य भएको बताउनुभयाे । पत्रकारिता अध्यापन, पुस्तक लेखनमा समेत क्रियाशील आचार्यको ‘चिन्तन मनन’ टेलिभिजन कार्यक्रम लोकप्रिय थियो । उहाँका श्रीमती, एक छोरी हुनुहुन्छ । हेर्नुहोस भिडियो ‘
Previous हाँस्दाहाँस्दै रुवाउने नयाँ टेलिश्रिंखला ‘सक्किगोनी’ को भाग ३ हेर्नुहोस् !
Next हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री ओलीको दसैँ